hyperion launcher အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » launchers » hyperion launcher
hyperion launcher APK ကို
တစ်ဦးက launcher ကအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ရုံတစ်အိမ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပံ့ပိုးမှု Chat ကို: t.me/HyperionHub
Hyperion အထိုင် (ဂူးဂဲလ် Feed Enable): kutt.it/hyperiondock
ကျနော်တို့ကအမြဲ Google ကတသမတ်တည်းအရှိန်အဟုန်မှာကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအဘယ်အရာကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အတူနေ့စွဲမှတက်ဖြစ်လိုသာလူတိုင်းလှပသော UX ကိုအတူချိုမြိန်, အင်္ဂါရပ်ပြည့်ဖြည့် launcher ထိုက်သင့်သောယုံကြည်အဖြစ်တသမတ်တည်းအသစ်သောအပြောင်းအလဲတွန်းအားပေး အသုံးပြုသူများဖောင်းမပါဘဲ ... ချင်သောနှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာ!
ငါတို့သည်သူအဘို့ဤ launcher ထုတ်ခဲ့; ကျနော်တို့ကဈေးကွက်တွင်တွေ့အများအပြား launchers ထံမှကိုချစ်ကိုအကောင်းဆုံး features တွေယူလာကာစုစည်းအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့် - ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျကဒီအိမ်မှာခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ခါတိုင်းလိုအဖြစ်ကျနော်တို့ပုံမှန် Launcher3 / Pixel တင်ပေးသူကိုအခြေခံပြီး launcher ရှိကြောင်းအရာအားလုံးကို, ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုရှိသည်!
•ဖွင့်တင်များနှင့်ဝဲ theme: Manuel Möllmann (နက်ရှိုင်းအမှောင် Theme) ကတစ်ဦးအဘက်ဘက်မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ
•အံဆွဲမီနူးနောက်ခံ; ချိန်ညှိခြင်းနှင့် scrolling ညွှန်ပြချက်အရောင်တောက်
• Folder ကိုနောက်ခံအရောင်
•ရှာရန်ဝစ်ဂျက်ကိုအရောင်များ (အံဆွဲမီနူး / အထိုင်)
• Desktop ကို, အံဆွဲမီနူးများနှင့်အထိုင်အိုင်ကွန်အပြောင်းအလဲများကို (အိုင်ကွန်အရွယ်အစား, တံဆိပ်အရွယ်အစား, စာသားအရောင်, စာသားမှောင်မိုက်အရိပ်, အကွိမျမြားစှာလိုင်းများ)
•အလိုက် icon ကိုပုံဖော် (Pro ကိုပိုမိုပုံစံမျိုးစုံနှင့်အတူမကြာခင်မှာပဲ!)
•အပြည့်အဝ launcher ဖောင်ပြောင်းလဲမှု (Pro ကို!)
•မျက်နှာဖုံးများ: ဖိုလ်ဒါ, သင်တစ်ဦးအဓိကအိုင်ကွန်နှင့်အတူ folder ကိုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ် mask အထိပွတ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်
•အိုင်ကွန်အထုပ်: လှုပ်ရှားမှုများဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်းသင့်ရဲ့ icon ကိုဗူးအပြောင်းအလဲများကို View!
• Hidden apps များ
•ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် menu ကိုပစ္စည်းများကို: ရှည်လျားသောအဆိုပါပင်မမျက်နှာပြင်ကိုနှိပ်တဲ့အခါသင်လိုချင်တာတွေ Adjust
• Desktop ကို (ယာယီသော့ဖွင့ပါဝင်သည်) သော့ခတ်
• Scrolling နောက်ခံပုံများ
• Status ကိုဘားနှင့် navigation bar အိုင်ကွန်အရောင် (Wallpaper / အမှောင် / အလင်း)
• Wallpaper gradient ကိုချိန်ညှိ
• Navigation bar ကိုခင်းကျင်းပြသ
• Google မှ (Hyperion အထိုင်) Feed
•စိတ်တိုင်းကျ Feed (မကြာခင်မှာပဲ)
အနီးကပ်အလိုအလျောက်• Remembering app ကိုအံဆွဲအနေအထား /
•အထိုင် / Page ကိုညွှန်ပြချက်ပုံစံ
•အလိုအလျောက် (Pro ကို!) အိုင်ကွန် Pack ကို / Substratum ဆောင်ပုဒ် dashboards နှင့်အခြား dashboards ဖုံးကွယ်
• Desktop ကို, အံဆွဲမီနူးများနှင့်အထိုင်
★ Widgets တွေ:
• Google Search ကို Widget လေး
• Google မှစမတ် Widget လေး (Pro ကို!): တစ် launcher plugin ကို / ရှောင်ကွင်းမလိုအပ်ပါသလား!
★ custom ဟနျအမူအရာ (Pro ကို!):
•တစ်ခုမှာ / နှစ်ဦးကိုလက်ညှိုးနှစ်ဆထိပုတ်ပါ, ထပွတ်ဆွဲဆင်းပွတ်ဆွဲ
• App ကိုဖြန့်ချိကာတွန်း
ပွတ်ဆွဲအကူးအပြောင်းအပေါ်•အရောင်မှိန်: OxygenOS င့်တင်ပေးနေဖြင့်အတုယူ
• Visual, အစဉ်မပြတ်သင်သည်သင်၏ set ကိုတက်တူအရာ၏မျက်နှာပြင်ပြသ!
• Cloud ကိုထပ်တူပြုခြင်း (လိုလားတဲ့အသုံးပြုသူများအတွက်မကြာခင်မှာပဲ!)
ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးလျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ development team နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်လှူဒါန်းခဲ့သောလူတစ်တစ်တန်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းချင်ပါတယ်!
app ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းကိုကာတွန်းအဘို့, ဆောင်ပုဒ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Substratum ဒီဇိုင်နာများအဘို့အရာတွေအများကြီးဖော်ထုတ်: - Manuel Möllmann!
- မက်စ် patch: လှပတဲ့ app ကိုအိုင်ကွန်သည်
- Amir Zaidi: အ pixel module တစ်ခုဆိပ်ကမ်းများအပေါ်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သူတစ်ဦးအကြီးအမိတျဆှေမြားနှငျ့အသည်းအသန် dev ဖြစ်ခြင်းသည်,
- PaphonB: အမြဲသင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံအကြီးအကြောင်းသေချာစေရန်အသေးစားအလားအလာ derps ဖမ်းသည်!
💬 Kottmann / ဒါဝိဒ်သည် Siedtmann (Lawnchair ရေးအဖွဲ့) မှီတိုငျအောငျ: ငါတို့သည်ဝေမျှဖို့တစ်ခုခုရှိအခါတိုင်းအမြဲရှိဖြစ်ခြင်းသည်, ငါတို့ရှိသမျှသည် launchers သေချာကြိုက်နှစ်သက်လွန်းအားလုံးအကြီးအများမှာ!
- သိုလှောင်မှု: ကျနော်တို့သပ္ပါယ်အရောင်များကိုသာနောက်ခံပုံများထုတ်ယူခြင်းများအတွက်သိုလှောင်မှုကိုသုံးပါနှင့်အရန်ကူးခြင်းနှင့် profile များကို restore ပြန်။ ကျနော်တို့ကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်ကိုမကျင့်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပထမ, ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယပါတီမဆိုအခြားသက်သေပြခြင်းနှင့် Non-သတ်မှတ် data transmit ။
- ပြက္ခဒိန်: သင်၏ Desktop ပေါ်မှာတစ်ခုတည်းသောပြပွဲဖြစ်ရပ်များရန်
- တည်နေရာ: (Optional) Desktop ပေါ်မှာအလိုအလျောက်ရာသီဥတုစာဖတ်ခြင်းသည်
ဒီ app (optional) မျက်နှာပြင်သော့ခတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုများအတွက်စက်ပစ္စည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်
- အိုင်ကွန်ဗူး related ပြုပြင်မှုများ၏တန်ချိန်။
- အကြောင်းကြားစာစက်နှင့်နက်ရှိုင်းသော shortcuts တွေကိုနှင့်အတူပျက်ကျ Fix ။
- ဂူဂဲလ် Feed အပြုအမူတိုးတက်စေပါ။
- အကြောင်းကြားစာအညွှန်းကိန်းမှစာသားကိုစတိုင် Add
- အန်းဒရွိုက် Pie အပေါ်သုံးစွဲသူများက screen ကိုသော့ခတ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်စွမ်းဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုရန်။
- က Samsung / LG က / EMUI dialer Fix နဲ့ app icon များဆက်သွယ်ပါ။
- ထိုအခါပိုပြီးအများအပြား ...
နောက်တဖန်ပျက်ကျ, ဆက်တင်များတွင်ထောက်ခံမှုအပိုင်းတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ!
Projekt ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ LLC
SA Hasan says:
ဇန်နဝါရီလ 26, 2019 မှာ 11: 06 ညနေ